DEG-DEG: Wiil uu Adeer U Ahaa Ra’iisul Wasaarihii Hore ee Somalia Oo Lagu Dilay Ciraaq+SAWIRRO – Puntland News
Home 2017 September 11 Somali News DEG-DEG: Wiil uu Adeer U Ahaa Ra’iisul Wasaarihii Hore ee Somalia Oo Lagu Dilay Ciraaq+SAWIRRO
DEG-DEG: Wiil uu Adeer U Ahaa Ra’iisul Wasaarihii Hore ee Somalia Oo Lagu Dilay Ciraaq+SAWIRRO
Waxaa la xaqiijiyay in dalka Ciraaq lagu dilay wiil uu adeer u ahaa Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid).
Wiilkan oo ka tirsanaa kooxda Khilaafada islaamiga ee Daacish ayaa heystay dhalashada Canada, waxaana lagu magacaabi jiray Faarax Maxamed Shirdoon, wuxuuna hore ugu biiray Daacish isagoo ka barbar dagaalami jiray kooxdaasi.
Sida ay qortay jariirada SUN ee kasoo baxda magaalada uu ka soo jeedo wiilkan ee Calgary, waxaa lagu dilay duqeyn bishii July ee sannadkii 2015-kii ka dhacday magaalladda Mosul ee dalka Iraq.
Faarax Maxamed Shirdoon wuxuu uu ku dhashay magaalladda Toronto ee dalka Kanada, ka hor intaysan Qoyskiisa u soo wareegin magaalladda Kalagari oo uu wax ku bartay.
Faarax Maxamed Shirdoon oo 24-jir ahaa, laguna naanaysi jirey Abu Usaamah Asoomaali waxa uu dalka Syria tegay Sanadkii 2014-kii, waxa uu noqday ahaa Afhayeenka Rasmiga ee Dagaalamayaasha Kooxda Daacish. Isagoo soo bandhigay Muuqaalo xayeysiin u ah Kooxda Daacish iyo kuwo uu ku cabsi gelin jirey dalalka Reer Galbeedka.
Abu Usamah as-Somali waxa kale oo uu sheegay inuu Alle dartiisa uga soo tegay Noloshii uu ku haystay dalka Kanada, wuxuuna meel Fagaare ah ku gubay Baasaboorkiisa dalka Canada, iyadoo marar badan la shaaciyay in la dilay.